ခင်ရတနာစိုး သူမအတွက် ထိုးပေးခဲ့တဲ့ တက်တူးက တလွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ရယ်ရမလို ငိုရမလိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ နီနီခင်ဇော် – Suehninsi
Sue | January 14, 2021 | ရသစုံ | No Comments
နီနီခင်ဇော်ရဲ့ Team Ni Ni က Finalist ပြိုင်ပွဲဝင် ခင်ရတနာစိုးကလည်း Winner ဆုကြီးနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ရပေမယ့် တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ရတနာစိုးကတော့ သူမရဲ့ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းကြောင့်သာမက Coach ဖြစ်သူ
နီနီခင်ဇော်ရဲ့ သင်ကြားပြသပေးမှုကြောင့် ပရိသတ်သိတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ဆရာသမား နီနီခင်ဇော်အတွက် နီနီခင်ဇော်ရဲ့ Logo ကို တက်တူးလေးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ရတနာစိုးထိုးလိုက်တဲ့ Logo က နီနီခင်ဇော်ထုတ်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း logo ဖြစ်နေတာကြော်င့ နီနီခင်ဇော်က “ကိုယ့် Logo ဆိုပီး Super Red logo
ထိုးလိုက်တဲ့ဆရာမ 😊 Phoenix က ကိုယ်ပိုင် Logo မို့လို့သူ့ကို ရှင်းပြရ​သေးတယ် .. ခင်ခင့်ကို ​ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… မိသားစုလိုသ​​ဘောထား​ပေးလို့ပါ…. သူ့ Fan ​တွေကိုယ်စား​တော့ ဆူထား​ပေးတယ်​​နော် 😄” ဆိုပြီး ခင်ရတနာစိုးအကြောင်းလေးကို ပြောပြလာပါတယ်။ နီနီခင်ဇော်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် logo လေးက
ဇာမဏီငှက်ပုံလေးဖြစ်ပေမယ့် ခင်ရတနာစိုးက နီနီခင်ဇော်ထုတ်တဲ့ Super Red အမှတ်တံဆိပ် Logo လေး ထိုးခဲ့တာကြောင့် ရယ်ရခက်၊ ငိုရခက်ဖြစ်ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခင်ရတနာစိုးတစ်ယောက် နီနီခင်ဇော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကတော့ ချီးကျူးစရာပါပဲနော်။ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
နီနီခငျဇျောရဲ့ Team Ni Ni က Finalist ပွိုငျပှဲဝငျ ခငျရတနာစိုးကလညျး Winner ဆုကွီးနဲ့ လှဲခြျောခဲ့ရပမေယျ့ တဈနိုငျငံလုံးက ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို အခိုငျအမာရရှိခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခငျရတနာစိုးကတော့ သူမရဲ့ ပငျကိုယျအရညျအခငျြးကွောငျ့သာမက Coach ဖွဈသူ
နီနီခငျဇျောရဲ့ သငျကွားပွသပေးမှုကွောငျ့ ပရိသတျသိတဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျဖွဈလာခဲ့ပွီး သူမရဲ့ ကြေးဇူးရှငျဆရာသမား နီနီခငျဇျောအတှကျ နီနီခငျဇျောရဲ့ Logo ကို တကျတူးလေးထိုးပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခငျရတနာစိုးထိုးလိုကျတဲ့ Logo က နီနီခငျဇျောထုတျတဲ့ အလှကုနျပစ်စညျး logo ဖွဈနတောကွျောင့ နီနီခငျဇျောက “ကိုယျ့ Logo ဆိုပီး Super Red logo
ထိုးလိုကျတဲ့ဆရာမ 😊 Phoenix က ကိုယျပိုငျ Logo မို့လို့သူ့ကို ရှငျးပွရသေးတယျ .. ခငျခငျ့ကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ… မိသားစုလိုသဘောထားပေးလို့ပါ…. သူ့ Fan တှကေိုယျစားတော့ ဆူထားပေးတယျနျော 😄” ဆိုပွီး ခငျရတနာစိုးအကွောငျးလေးကို ပွောပွလာပါတယျ။ နီနီခငျဇျောရဲ့ ကိုယျပိုငျ logo လေးက
ဇာမဏီငှကျပုံလေးဖွဈပမေယျ့ ခငျရတနာစိုးက နီနီခငျဇျောထုတျတဲ့ Super Red အမှတျတံဆိပျ Logo လေး ထိုးခဲ့တာကွောငျ့ ရယျရခကျ၊ ငိုရခကျဖွဈခဲ့ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ခငျရတနာစိုးတဈယောကျ နီနီခငျဇျောကိုခဈြတဲ့စိတျကတော့ ခြီးကြူးစရာပါပဲနျော။ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
Source : Ni Ni Khin Zaw’s Facebook
Post Views: 37,076
မအေးသောင်းနဲ့ ဗီဒီယိုရိုက်ရင်း မျက်မှာမှာ နှုတ်ခမ်းနီတွေ ပါးနီတွေနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကိုယ်သူကြည့်ပြီး သဘောတွေကျနေတဲ့ မြင့်မြတ်